Kartikeya Ghimire Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Kartikeya Ghimire
बाल कथा : ताली
~कार्तिकेय घिमिरे~ रमेशले पुरस्कार पाउँदा सबैले ताली बजाएको सुवासले हेरिरहेको थियो । उसलाई त्यतिबेला खल्लो लागिरहेको थियो । उसले मनमनै सोच्यो – “मैले खेल्न सक्ने खेल पनि भइदिएको भए, मैले पनि यसरी नै पुरस्कार पाउँथे होला ।” यिनै कुरा सोच्दासोच्दै … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
बाल एकाङ्की : साथी ! मेरो पाँच रुपियाँ, तिम्रा लागि
~कार्तिकेय घिमिरे~ स्थान – एउटा घरको बैठक कोठा समय – दिउँसो पात्रहरु आमा : ३५ वर्षकी अधबैंसे । छोरी : ११ वर्षकी । (पर्दा खुलेपछि रङ्गमञ्चमा एउटा घरकोे बैठक कोठाको दृष्य देखिन्छ । घरमा कुनै चलहपहल देखिँदैन । बैठक कोठामा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : बाल एकाङ्की	| Kartikeya Ghimire	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
बाल कथा : राम र श्याम दुबै बेस्सरी रोए
~कार्तिकेय घिमिरे~ रामले श्यामको गालामा चड्याम्म हिर्कायो । सबै साथीहरू अचम्म मान्दै हेर्न थाले । बिहानको समय थियो । सबै विद्यार्थीहरू लाइन लागेर प्रार्थना गीत गाउने तरखरमा थिए । अचानक यस्तो दृश्य देख्नुपर्दा एकछिन सबैजना अलमलमा परे । ‘ल अब … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लेख : बालसाहित्य लेखनमा मेरा केही अभिमतहरू
Editor | July 20, 2017
~कार्तिकेय घिमिरे~ बालसाहित्य लेखन एउटा गम्भीर लेखन हो । जसरी एउटा सानो बालकलाई लिटो तयार गर्न आमाले भरपूर मिहिनेत गर्छिन्, त्यसरी नै एउटा बालबालिकाका लागि लेख्ने लेखककले रचना तयार गर्न विशेष मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यसैले यदि तपाईं रहरका लागि यो … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : लेख	| Kartikeya Ghimire	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
बाल कथा : तिम्रो चौकी भत्काइदिन्छु
Editor | July 18, 2017
~कार्तिकेय घिमिरे~ “गे रामजनम” – रामजनमकी आमा झिजिया चिच्याउदै कराई। उसको आवाज सुन्नासाथ सबै केटाकेटी सतर्क भए। उनीहरू हतार-हतार किनारामा निस्किएर कट्टु गन्जी लगाउँदै घरतिर दौडिए। रामजनम डराउँदै-डराउँदै आमा छेउमा गएर उभियो। मोटी थाक्सी गजधम्म शरीर भएकी उसकी आमा देख्दै … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : उनको ओठमा नफापेको मुस्कान
~कार्तिकेय घिमिरे~ मेरो उपस्थितिले न उनलाई गलायो न हँसायो नै । हुन त मेरो हैसियत नै के छ र जसले उनलाई हँसाओस् या गलाओस् । म किन आएँ यहाँ थाहा छैन । म किन यहाँबाट जाँदैछु, त्यो पनि थाहा छैन … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : नेपाली कथा	| Kartikeya Ghimire	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
बाल कथा : मेरी सानी बहिनी
~कार्तिकेय घिमिरे~ जाँच सकिएकाले मेरो मन फुरुंग भएको छ । आज बिहान मैले ड्राइभर अंकललाई आँगनको कुनामा टोलाएर रुँदै बसेको देखेँ । सोधेँ, ‘अंकल, किन रुनुभएको ?’ उनी भुइँतिर हेरेर टोलाउन थाले, केही बोलेनन् । फेरि सोधेँ, ‘भन्नुुुस् न, तपाईंलाईं … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : भोक
~कार्तिकेय घिमिरे~ गाउँमा हाट लागेको छ । रङ्गीविरङ्गी कपडा, खेलौना कचेडी मुरै सबथोक चौरमा बिक्रीका लागि राखिएका छन् । रामजनम अम्बा बेच्न आएको छ । आज ऊसँग उसकी छोरी रीतबा पनि आएकी छे । हाट बिस्तारै बिस्तारै बाक्लिदै जान्छ । … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
~कार्तिकेय घिमिरे ~ नमस्ते म आशा हुँ । अहिले म काठमाडौंको एउटा विद्यालयमा कक्षा सातमा पढ्छु । मेरो विद्यालय एकदमै रमाइलो छ । चौरमा थरीथरीका फूल फुलेका छन् । सर मिसले पनि मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ । मेरो कक्षाका साथीहरु … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
~कार्तिकेय घिमिरे~ आहा ! आज धरहरा घुम्न जान पाइने भो, मनीषा मनमनै दङ्ग पर्दै एक्लै कराइन् । एकछिन पछि उनी फुर्कंदै नाचेझै गर्न थालिन् । उनी दङ्ग परेको देखेर कीर्तिपुर बालगृहका अरू सबै साथीहरू पनि खुसीले गद्गद् भए । एक … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
बाल कथा : डस्टर उड्यो
~कार्तिकेय घिमिरे ~ मध्यान्हको समय थियो । चर्को घाम लागिरहेको थियो । कक्षा ४ का विद्यार्थीहरु कक्षा कोठाभित्र खुबै हल्ला गरिरहेका थिए । हा–हा हु–हु गर्दै उनीहरु कक्षा थर्काउँदै कराइरहेका थिए । ट्वाङ्ट्वाङ् घन्टी लाग्यो । कृष्ण सर कक्षा कोठाभित्र … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
बाल कथा : हनुमानले सूर्य निले
~कार्तिकेय घिमिरे~ एउटा रमाइलो जङ्गल थियो । त्यहाँ एक दिन एउटा बाँदरले चिटिक्क परेको बच्चा जन्मायो । बच्चा अचम्मको थियो । जन्मेको केही छिनमै ऊ आकासमा उड्न थाल्यो । ऊ निकै फुर्तिलो थियो । रूखको एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उफ्रन्थ्यो … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →